Akụkọ - Njirimara nchekwa ọkụ na gburugburu ebe obibi nwere ọfụma
Njirimara nke nchekwa nchekwa na gburugburu ebe obibi
Wayo a gbanyere site na nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi abụghị naanị nke dị oke mma, kamakwa ọ dị oke mma edo na kwụsie ike, ya na nnukwu wayo na ezi ọdịnaya calcium. Taa, anyị ga-amụta maka njirimara nchekwa ọkụ na gburugburu ebe obibi dị mma.
1) Ebe ọ bụ na ihe a na-aga n'ihu na-acha ọkụ ọkụ, ọ dị elu ma dị mma na-agba ọsọ, nke na-enye nkwa maka ụlọ ọrụ dịka osisi nchara iji gbasaa ọnụ ọgụgụ ma belata ọnụahịa mmepụta.
2) Nnukwu ogo nke akpaaka, usoro ntanetị, mmadụ ole na ole nwere ike ịrụ ọrụ niile.
3) Edo ngwaahịa mma.
4) Vetikal wayo n'ekwú ọkụ bụ ihe na-emeghe calcination, elu-tech mmepụta usoro, dịtụ ala oriri ike karịa ochie style wayo n'ekwú ọkụ usoro, na ike iji n'efu gbawara n'oké ọkụ gas dị ka mmanụ ụgbọala nke bụ ihe gburugburu ebe obibi-echebe.
5) Akpaka na ntuziaka usoro na-ma onwem. Ewezuga ọrụ aka nke igbe ọrụ na saịtị, ha niile nwere ike ijikwa kọmputa na ime ụlọ nchịkwa.
6) A na-egosipụta data nke akụrụngwa niile (dị ka nlele nrụgide, mita na-asọpụta, akụrụngwa) na kọmputa ma nwee ike ibipụta ya site na ngwa nbipute.
7) Complete Siemens nwere ọgụgụ isi erikpu modul batching, erikpu na-akwụ ụgwọ usoro.
8) A pụrụ ịdabere na lime n'ekwú ihe onwunwe larịị gauges, smart nna ukwu na ndị ọzọ na proprietary akụrụngwa.
9) Akpaka na ntuziaka usoro na-ma onwem. Ewezuga ọrụ aka nke igbe ọrụ na saịtị, ha niile nwere ike ijikwa kọmputa na ime ụlọ nchịkwa.
Calcium Hydroxide Ime, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Calcium hydroxide akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa,